10 sharci oo hogaaminaya mashruuc hal abuur wanaagsan - Creativos Online | Abuurista khadka tooska ah
In kasta oo bartamaha sanadka 2018 aan caadeysanay inaan kaligeen shaqeeyno. Ku socota is-maamul iyo shaqo is-baray. Markaan dooneyno inaan fulino mashruuc balaaran waxaa nalagu qasbay inaan abuurno koox. Xaaladdan oo kale, ma awoodi doonto inay shaqeyso haddii aan la macaamilno saaxiibo 'naga caawiya' shaqada. Waxaan ku qasbanaaneynaa inaan u xilsaarno kala sarayn si aan si fiican u aasaasno shuruudaha uu qof walba mas'uul ka yahay. Sidaa darteed, qaar waxay yeelan doonaan mas'uuliyadda ugu weyn kuwa kalena waxay yeelan doonaan shaqada ugu yar. Waxaan haynaa 10 sharci, uguyaraan kuwaan halkaan ku arki doonno.
10ka sharci ee aan ka hadlayno waxay isku dayi doonaan inay kugu kalifaan inaad dejiso shuruudahaaga inuu mashruuc hogaamiyo. Marka, markaad sameysato shirkad aad iska leedahay oo aad fuliso mashaariicdaada, waxaad ogaan doontaa qodobbada muhiimka ah inaad noqoto hogaamiye wanaagsan.
2 Saameynta kooxda
3 Wax walba waxay leeyihiin nidaam
4 Ku socoshada isla jihada
5 Haddii aad taqaanid sida loo dhiirrigeliyo, waxaad yeelan doontaa dhagaystayaal
6 Aniga iyo adiga
7 Aaminaad iyo Ixtiraam
8 Soo jiito asxaabtaada
9 Kordhi kooxdaada
10 Dhaxalka Hogaamiyaha
Had iyo jeer waxaan ku dhahaa waa inaad raadsataa hogaamiye kooxeed oo aadan raadinin maamule. Isku mid ahaanshaha naftiisa waa inuu rumeeyaa inuu yahay hogaamiyaha, hagaha oo uusan aheyn madax madax-bannaan. Sidan ayaan ku ilaalin doonnaa koox shaqo oo hal abuur leh oo dhiirigelin leh. Awooddaas hoggaamineed ayaa go'aamin doonta sida qofka waxtar u yahay.
Markaad sameysid shirkaddaada, inta badan waxaan u maleynaa inaan nahay wax walba. Taasi ma shaqeynayso la'aanteena iyo in wax walboo hareeraheenna ah aan iska mahadsan nahay. Awooddu ma damaanad qaado hoggaamin. Marka waad heli kartaa shaqaale oo waxaad soosaari kartaa lacag, laakiin kooxdu ma dhiirrigelinaysaa mise hal abuur ku filan baa? Awooddu kuma siineyso hogaan aad ku gaarto hadafkaaga. Waa inaad noqotaa mid lagu kalsoonaan karo oo saamayn ku yeelan kara shaqaalahaaga si ay u dareemaan inay si fiican ugu hoggaansan yihiin mashruuca.
Wax walba waxay leeyihiin nidaam
Waxaan aragnay laba sharci oo aan daqiiqad qudha lagu guuleysan. Xaqiiqda ah in la abuuro koox, shirkad iyo in aad yeelato mashruuc lagu kalsoonaan karo kaama dhigeyso hogaamiye. Tani waxay ku saabsan tahay farsameynta, maalinba mar. Waa inaad sameysid shuruudo cayiman iyo isgaarsiin shaqaalahaaga maalin kasta si ay u shaqeyso.
Hoggaamintu waxay horumartaa maalin kasta
Ku socoshada isla jihada
Qof kasta ayaa mas'uul ka noqon kara mashruuc oo xukumi kara. Cadee waxa mowqifkaagu ka yahay booskaaga faa iidada leh. Dhibaatadu waxay timaadaa markaad rabto inaad hadaf gaarto. Haddii aadan ka dhigi karin kuwa kula safka ah inay arkaan himilada, waxaa laga yaabaa inaadan waxba hogaaminayn.
Haddii aad taqaanid sida loo dhiirrigeliyo, waxaad yeelan doontaa dhagaystayaal
Maahan ku dhaqanka caqiidada, ama ku saabsan tababarka shaqaalaha raacaya mashruucaaga. Waxaad u baahan tahay inaad ka hesho kartida ugu fiican iyaga, taasi waa sababta aad u hogaamineyso mashruuc waa inaad taqaanaa sida loo gudbiyo. Haddii aad la joogtid muuqaal dhow oo kooxdaada ah, markaad hadlaysid way ku dhageysanayaan. Oo haddaba, waxay kaa caawin doonaan inaad gaarto hadafkaaga.
Aniga iyo adiga
Sidii aan horeyba u sheegnay, waxaad u baahan doontaa mashruuc adag. Laga soo bilaabo qaab-dhismeed adag, oo tilmaamaya awooddaada hoggaamineed. Tani waxay si togan saameyn ugu yeelan doontaa kooxdaada, maadaama ay aamminsan yihiin in waxa ay sameynayaan ay wanaagsan yihiin. Kooxda si ay adiga kuu aaminto, waxay u baahan doontaa kalsooni ay ku sameyso iyada oo aan wax walbo su'aal laga weydiinin. Sameynta jawi aamin ah oo udhaxeeya adiga iyo kooxdaada ayaa muhiim noqon doonta.
Aaminaad iyo Ixtiraam
Aadamuhu dareenkiisa aasaasiga ah wuxuu u baahan yahay qof leh karti hoggaamineed. Qof naftiisa, astaamo taas ka xoog badan isaga. Sidan ayaa lagugu hagi karaa tallaabooyinkooda waxayna raaci doonaan qaab kasta. Hubi in taas la hubo sasabasho waxay noqon doontaa muhiim in la helo koox shaqo oo mideysan.
Soo jiito asxaabtaada
Waxay ku xirnaan doontaa shaqada aad qabato meesha ugu horeysa si aad u soo jiidato shaqaale wanaagsan oo kooxdaada ah. Waxay kuxirantahay sida aad u shaqeyso, waqtiga iyo tayada, waxaad soo jiidan doontaa koox shaqo oo leh tayo isku mid ah. Waxay kugu arki doonaan shaqo go'an oo xiiso badan. Haddii, dhanka kale, aad shaqeyso adigoo aan ku qanacsaneyn, si xun oo dhakhso leh, waxay ku dayan doonaan muuqaalkaaga.
Awoodda hoggaamiye waxaa go'aamiya cidda ku hareeraysan. Mararka qaarkood waxaan ku aragnaa asxaabta, waxaan ku dayanaa waxa ku jira saaxiibadayada saaxiibka ah. Isla wuxuu la shaqeeyaa
Maahan in la tilmaamo qofka qaldan, tani waxay ka dhigeysaa inay ka baqaan inuu qaldan yahay. Jawiga hal-abuurka waxaa muhiim ah in la horumariyo fikradaha lana sameeyo khaladaad. Tijaabi isbeddellada cusub oo soo hel wax cusub. Haddii aad tilmaamto oo aad ku jees jeesto adigoo raadinaya dambiile, ma awoodi doontid inaad ku riixdid kooxdaada hadaf guud.
Qiimahaaga hogaamiye waa in lagu qiyaasaa kuwa kugu hareeraysan. Haddii aad leedahay dhaxal wanaagsan waxaad yeelan doontaa dhaxal weyn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » 10 sharci oo hogaaminaya mashruuc hal abuur wanaagsan
Qaabka loogu waxyooday inay abuuraan superheroes